Home Wararka Ururka Daacish oo sheegtay in ay dileen guddoomiye degaan ee ka tirsan...
Ururka Daacish oo sheegtay in ay dileen guddoomiye degaan ee ka tirsan Puntland
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya dowlad goboleedka Puntland, weerar qorsheysan ayaa xalay dabley ka tirsan kooxda argagaxisada Daacish ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolka Bari, kaas oo lagu dilay mas’uul sare oo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland.
Sida ay sheegeen goobjoogyaal mas’uulka lagu dilay weerarka uu ahaa guddoomiyihii degaanka Balli-Dhidin ee gobolka Bari, kaas oo ay khaarijiyeen xubno ka tirsan kooxda Daacish. Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Muumin, waxaana la sheegay in ilaaladiisa ay iska hor imaad kooban la galeen ragga weerarka fuliyey.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxda dilka ka dambeysay oo ka tirsan Daacish ay goobta isaga baxsadeen, kadib toogashada guddoomiyaha. Dhinaca kale Puntland ayaa war kasoo saartay dilka Marxuum Maxamed Axmed Muumin, waxaana qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi Mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad tacsi loogu diray ehellada marxuumka iyo reer Puntland.